नारी जागरण अभियानमा कानूनी प्रशिक्षण – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ भाद्र ९ गते शनिबार १८:४१ मा प्रकाशित 21
पोखरामा शुक्रबारदेखि शुरु भएको नारी जागरण अभियानमा शनिबार पोखरा महानगर वडा नं. १२ मा कानुनी प्रशिक्षण दिइएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको महिलाको हक अधिकारका विषयमा केन्द्रित भएर प्रशिक्षण दिइएको हो ।
समाजमा भइरहेका महिलासँग संवन्धित घटना, हिँसा, बलात्कार लगायतका घटनामा महिलाको अधिकार र यसको प्रतिवाद गर्ने कानुनी आधारका बारेमा अधिवक्ता भगवती पहारीले प्रशिक्षण दिएकी हुन् ।
उनले महिलाहरु कानुनी रुपमा सचेत हुन र आप्mनो अधिकारका बारेमा जानकारी लिनुपर्ने भन्दै आप्mनो अधिकार थाहा नपाउँदा पनि महिला पछाडी पर्नुपरेको बताइन् ।
पोखरामा क्रियाशिल ६० भन्दा बढी महिला संघ संस्थाको सहभागितामा विकृति रोक्न भन्दै महिला जागरण अभियान चलेको हो ।
नजिकिँदै गरेको हरितालिका तीजको अवसरमा भड्किलो व्यवहार गर्न भन्दा पनि महिलाले आप्mनो अधिकार थाहा पाउन र सशक्तिकरणमा जोड दिने उदेश्यले अभियान चलाएको नारी जागरण अभियानका संयोजक अन्जु केसीले जानकारी दिइन् ।
महिलाहरु आप्mनो अधिकारमा सचेत रहनुपर्ने भन्दै केसीले महिलाका समस्या समाधान गर्न हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले समाजमा रहेका विकृति हटाउन स्थानीय स्तरबाटै पहल हुनुपर्ने बताए । उनले सबै जात जाति, धर्म, संस्कृतिमा विकृति मिसिँदै गएको भन्दै बेलैमा सजग हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा वडा नं. ९ का वडा सचिव लोकदर्शन कोइरालाले प्रकृति, संस्कृति र मौलिकतामा रहनुपर्ने बताए ।
उनले विकृति विसंगति विरुद्ध महिलाहरुले चलाएको जागरण अभियानका प्रशंसा गर्दै यसलाई सबैले अनुकरण गर्न जोड दिए ।
पोखरा १२ का वडा सदस्य अभियानका अभिन्ता सीता बास्तोलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य अर्का वडा सदस्य विष्णु विकले राखेका थिए । प्रकृति, संस्कृति र मौलिकता जोगाऔँ, विकृति हटाऔँ भन्ने नारासहित संचालन गरिएको कार्यक्रमको संचालन फिस्टेल नर्सिङ क्याम्पसका प्रिन्सिफल जिता बरालले गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधीहरु निर्मल थापा, देशभक्त केसी लगायतको सहभागिता थियो । अभियान आइतबार वडा नं. ११ मा हुनेछ ।